नयाँ शक्तिका संयोजकलाई गोरखाबासीको पत्र - Ratopati
बाबुराम भट्टराई (लालध्वज) ज्यू,
कुनै राजनीतिक दल र सङ्गठनभन्दा माथि सोच राखेर यो पत्र लेखिरहेको छु । १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार २० वर्ष पछाडि पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो र त्यसको नतिजा पनि लगभग आइसकेको अवस्था छ । यो नतिजा आइरहँदा पक्कै पनि तपाईंको मनमा तरङ्ग आएको नै होला । तर त्योभन्दा गोरखाली जनता बढी चिन्तित र पीडित बनेका छन् । डा. साब हिजोको इतिहास जसलाई तपाईं हामीले बिर्सनु हुँदैन, त्यही गोर्खाली जनताले नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी मत र मतअन्तरले तपाईंलाई जिताएर यो देशको सर्वोच्च कार्यकारिणी पदमा पु¥याएकै हुन् ।
यो स्थानीय निवार्चन तपाईं आफै संवैधानिक पदको अध्यक्षमा रहेर अहोरात्र खट्नु भएको हो र संविधान निर्माण गर्न दलहरु सफल भए । यस संविधानमा सबै दलको भावना नसमेटिएका हुन सक्छन् । तर देशलाई एउटा द्वन्द्वबाट शान्ति प्रक्रिया हँुदै आर्थिक समृद्धिका लागि संविधान निर्माण गरिएको हो । यसलाई ९० प्रतिशत जनताको स्वीकार्यता छ । यही संविधानको एउटा अंश हो स्थानीय निवार्चन । यसैले सिहंदरबारको अधिकार जनताको घरदैलोमा पुर्याउन सफल हुनुपर्छ । जो हिजो सङ्घीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी, समानुपातिक जस्ता शब्दहरु सुन्नै चाहँदैन थिए, उनीहरुले नै आज तपाई–हामी परिवर्तनगामी जनतालाई निषेध गर्दैछन् । आजसम्मको कम्युनिस्ट इतिहास हेर्दा टुटेर होइन, जुटेर मात्र जनतालाई अधिकार दिन सफल भइन्छ भन्ने कुरालाई विर्सन हुँदैन । माओवादी आन्दोलनले उठाएका कतिपय मद्दा आझै पनि बाँकी नै छन् ।
जनतालाई अधिकार दिने कुराहरु जति हामी कमजोर हुन्छौँ, त्यति नै जनताले कम अधिकार पाउँछन् । १० वर्षे जनयुद्धमा १७००० हजारभन्दा बढीले बलिदान दिए । त्यही बलिदानको भावनालाई कदर गर्दै एकै ठाउँमा रहेर जनतालाई अधिकार दिनुपर्ने बेला आएको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा तपाईंलाई कम मत दिए होलान् तर तपाईंलाई अझै पनि जनताले फरक हो भनेर पाखा लगाएको छैनन् । अहिलेको चुनावी परिणामलाई युद्धकालीन नेतृत्वहरुको मत सङ्ख्या हेर्दा हाम्रो परिवर्तनगामी शक्ति अगाडि नै छन् । नेपालको कम्युनिष्ट इतिहास हेर्ने हो भने बेलाबृलामा फुट र एकता हँुदै आएको छ । ने.क.पा एमालेबाट नै बामदेवले माले पार्टी निर्माण गरेको हुन् । पछि फेरि एमालेकै मूल धारमा फर्केकै छन् ।
त्यस्तै क. बादल पनि पार्टीको मूल धारमा फर्केकै हुन् । यस्ता विषयलाई मूल्याङ्कन गर्दै एकै ठाउँमा बसेर लखौँ जनतालाई अधिकार दिने विषयमा तपाईंलाई सम्मानका साथ पुरानै ठाउँमा स्थिपित गर्नेछौँ । २०५२ सालमा माओवादीले सुरु गरेको जनयुद्धमा तपाईको व्यक्तिगत प्रभावले गर्दा कति मध्यमवर्गीय जनताले जनयुद्धलाई साथ दिएका थिए । तर अहिले तिनै महान जनतालाई बीच बाटोमै छाडेर जान तपार्इंहरुलाई पक्कै पनि छुट दिने छैन । हिजो एउटै पार्टीमा रहँदा पूरा गर्न नसकेको के चाहिँ कुरा तपाईले आज नयाँ शक्ति पार्टी मार्फत पूरा गर्नुभयो ? आम नेपाली जनताले तपाईंबाट उत्तर खोजिरहेका छन् ।
तपाईंले नयाँ शक्ति पार्टी नेपालको संयोजक भएर के सोच–विचार गरिरहनुभएको छ, त्यो तपाईंसँगै निहित कुरा हो । तर आज आम नेपाली त्यो पनि न्यायप्रेमी गोरखालीले तपाईंहरुलाई एकै ठाउँमा रहेर आएको हेर्न ठूलो इच्छा र आतुर छन् । यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सबैले आआफ्नो ठाउँबाट मनन् गर्नु जरुरी छ ।